हेटौंडामा सवारि दुर्घटना ,एक जनाको मृत्यु - हेटौंडा टुडे
हेटौंडामा सवारि दुर्घटना ,एक जनाको मृत्यु
८ माघ २०७६, बुधबार १३:२९
हेटौंडा, ८ माघ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ नवलपुरमा गएराति सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना गम्भीर घाईते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने २१ वर्षीय सुनिल स्याङतान रहेका छन् ।
मनहरीबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको ना ५ च १७७७ नम्बरको तरकारी बोकेको जीपले विपरित दिशाबाट जाँदै गरेका ना ४३ प ३९१४ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनाबाट गम्भीर घाईते भएका स्याङतानको हेटौंडा अस्स्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक ललन प्रसाद कुर्मीले जानकारी दिए । स्याङतान मोटरसाईकल चालक हुन् ।
दुर्घटनाबाट अर्का एक जना गम्भीर घाईते भएका छन् । घाईते हुनेमा मोटरसाईकलमा सवारी मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ९ बस्ने १८ वर्षीय साजन भ्लोन रहेका छन् । उनको हेटौंडा अस्पतालमा उपचारपश्चात चुरेहिल अस्पतालमा थप उपचार भइरहेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
ठक्कर दिने गाडी र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको जनाइएको छ।